Sheekh Shariif iyo CC Shakuur oo soo bandhigay runta heshiiskii badda ee Kenya | Dalkaan.com
Home Warkii Sheekh Shariif iyo CC Shakuur oo soo bandhigay runta heshiiskii badda ee...
Sheekh Shariif iyo CC Shakuur oo soo bandhigay runta heshiiskii badda ee Kenya
Muqdisho (dalkaan)-Waxaa caawa Muqdisho lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen inta badan siyaasiyiinta reer Muqdisho oo ay ugu horeeyaan golaha midowga musharaxiinta, waxaana kulankaas lagu soo dhaweynayey go’aankii ay maxkamadda ICJ ka qaadatay kiiska badda ay sanadihii lasoo dhaafay isku heysteen Soomaaliya iyo Kenya, waxaana kulanka khudbado ka jeediyey siyaasiyiin u badan xubnaha midowga musharaxiinta.
Cabdi Xaashi oo sii hadlaayey ayaa yiri, “Caawa laba dareen ayaan qabaa, kan koowaad waa dareen farxadeed oo ku aadan xukunka maxkamadda, waxay ICJ cadeysay oo noo ogolaatay waxa aan xaqaa u leenahay, dareenkeyga labaad waxa uu yahay, waxaad moodaa 1947-kii halkii aan joognay inaan caawa taaganahay, goortaas oo aheyd xiili ay Soomaaliya isku heysteen dalal awood badan, marka waxaan is leeyahay amay maanta u egtahay sidii berigaas oo gumeysi la idin geliyaa? Taasna waxaa noogu wacan inaan ku guuldarysanay inaan dadkeena isku keeno.”
Dhankiisa madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo dalka xukumayey markii uu soo bilaawday muranka galabta lasoo afjaray ee badda ayaa ka hadlay goobtaas, isagoo ku adkeystay in heshiiska la sheegayo inay galeen Kenya iyo xukuumadiisii ayuusan waxaba ka ogeyn.
“Xukuumadeydii waxaa lagu qanciyey inay lagama maarmaan tahay in anaga iyo Kenya aan badda wax iska dhahno Cumar Cabdirashiid oo xukuumadda hoggaaminaayey iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsanaa ayaa go’aanka qaatay. Aniga la ilama soo socodsiin arrintaas, subaxdii heshiiskaas la saxiixaayey waxaa isoo wacay Cabdiraxmaan oo iyiri madaxweynow waxaa la rabaa in heshiiskaas la saxiixo ee maxay kula tahay? Waxaan iri Ra’iisul wasaaraha warsiika yeel, waxii Alle naga siiyaba,” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Waxuu intaas ku sii daray, “Intaas kadib waxaan waxay r/wasaare Cumar waxaana dhahay maxaa arrintaan iiga qarisay? Waxuuna iigu jawaabay waxaan moodayey inaad ogtahay, wixii markaas ka dambeysay qeylo dhaan ayaa is qabsatay, waxaana magaalada gashay in badii la gatay, waxay noqotay inaan Cumar iyo Cabdiraxmaan aan ka shakiyo, seddaxdeenu weligeen iskama aanaa warsan arrintaas nin kasta ninka kale markii uu arko waa ka sii jeesa jiray, marka Ilaahaa mahad leh oo hadda naga xoreeyey arrintaas.”
Previous articleFarmaajo oo weerar culus ku qaaday Kenya iyo Jubaland
Next articleSHARIIF iyo CC Shakuur oo xalay soo bandhigay runta heshiiskii badda ee Kenya
Manchester United ayaa dooneysa inay ku soo laabato wadooyinkii guulaha ee Premier League marka ay booqaneyso King Power Stadium si ay ula dheesho Leicester...
Ahlu Sunna oo war culus kasoo saartay dagaalka ka qarxay degaanada...